Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင် - အခမဲ့ငှက်များ - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်: Free Birds သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည်
Netflix နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀ - Tig သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိသတ်များနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု Netflix ရှိအကောင်းဆုံးသူလျှိုရုပ်ရှင် ၁၃ ကား Netflix ရုပ်ရှင် က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များ - ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်ကိုနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်တွင် အခမဲ့ငှက်များ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပူးပေါင်း!
လာသောအခါ Netflix အပေါ်အရှက်မရှိသော၏ရာသီသစ်ဖြစ်ပါတယ်
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်သည်။ အခမဲ့ငှက်များ ဂျင်မီဟေးဝါ့ဒ်၊ စာရေးသူ Scott Mosier၊ Hayward လည်းရုပ်ရှင်ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အခမဲ့ငှက်များ အဓိကဇာတ်ကောင်များပြောသောသရုပ်ဆောင်လေး ဦး ပါ ၀ င်သည်။ Amy Poehler၊ Owen Wilson, Woody Harrelson နှင့် George Takei တို့သည်ရုပ်ရှင်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ အဲဒါဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ ရိုးသားဖို့, ငါဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်မဟုတ်ခဲ့လိုရှိ၏, နှင့် Poehler, Harrelson, Wilson နှင့်ဂျော့ခ်ျ Takei အမှန်တကယ်ရုံရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကြက်ဆင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်များတွင် Reggie (Owen Wilson), သူကကျေးဇူးတုံ့ပြန်အပေါ်ကိုမစားဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတအားဖြင့်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ခံရဖို့ဖြစ်ပျက်သူတစ် ဦး အိမ်မွေးကြက်ဆင်, Jake (Woody Harrelson), ကြက်ဆင်ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ခိုက်နေရိုင်းကြက်ဆင်နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းမည်။ အတူတူ Reggie နဲ့ Jake တို့ဟာအချိန်ပြန်ပြီးသမိုင်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီး Thanksgiving မှာရွေးချယ်စရာအမဲသားမဖြစ်ရအောင်တူရကီတွေကိုတားဆီးလိုက်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အခမဲ့ငှက်များ အလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမရခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အော်စကာမှအမည်စာရင်းတင်ထားသောကာတွန်းကားကိုသင်သွားမည်ဟုစဉ်းစားလျှင်သင်စိတ်ပျက်သွားလိမ့်မည်။ သငျသညျပျော်စရာ, မိုက်မဲ, ရယ်စရာ, အချိန် - ခရီးသွား, တူရကီနှင့်ပတ်သက်ပြီးကာတွန်း Thanksgiving ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့လိုလျှင်သွားလျှင်, သင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် အခမဲ့ငှက်များ!
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါကလူတွေပြောသကဲ့သို့ထက်ဝက်အဖြစ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်ထင်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အလွန်ကောင်းသောဖြစ်မသွားခဲ့သည်စဉ်းစားရုပ်ရှင်သို့သွားခဲ့ပါဘူး။ မင်းထင်တာကိုကြည့်ပါ ဦး ။
မယုံနိုင်စရာ Jessica James netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အကယ်၍ အခမဲ့ငှက်များ သင် Netflix တွင်ရှာဖွေနေသည့်အားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်အတိအကျမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူး၏ကျန်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးပါ Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင် !
ပူပြင်းတဲ့အမေရိကန်နွေရာသီ mckinley ပေါ်သို့
hulu အဆိုပါ flash ရာသီ 4